မောင်သီဟ ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် ဒလရှိ အမျိုးများထံ အလည်သွားရန်စိတ်ကူးသည်။ သောကြာညနေ ကျောင်းမှစောစောပြန်လာကာ အထုပ်ပြင်နေစဉ် အဘွားရောက်လာသည်။
“သောကြာ ရေကြောင်း မသွားကောင်း။”
မောင်သီဟ ပျင်းပျင်းနှင့် ကမ်းနားထွက် လေညင်းခံသည်။
အိမ်အပြန်တွင် အပူမိ အဖျားတက်သည်။ ဦးလေးက လေစိမ်းခံ၍ ဖျားသည်ပြောသည်။ ယနေ့တိုက်သောလေတွင် မည်သည့်အရောင်မှ မပါသည်မှာ သေချာသည်။ ညဦးပိုင်းခန့်တွင် အတန်ငယ် နာလန်ထ၍ ရေချိုးမည်ကြံသော် အမေက ဤသို့ဆိုသည်။
“ငါ့သားရွှေတောင် ရေကိုရှောင်၊ အောင်စံဖြိုး ရေချိုးရက်။”
သောကြာ စနေ ရေမချိုးရ။ တနင်္ဂနွေမှသာ ချိုးရမည်။ ယနေ့သောကြာဖြစ်၍ နောက်နှစ်ရက်စောင့်။ မောင်သီဟတစ်ယောက် ချွေးနံနံနှင့်ပင် အိပ်ရာဝင်သည်။
တနင်္ဂနွေရေချိုးပြီးသော် အနည်းငယ်သန့်သွားသယောင်ရှိသော်လည်း အားမရသေး။ နောက်နေ့ခေါင်းလျှော်မည်ဟု တေးသည်။ တနင်္လာမနက် ကျောင်းမှ ခွင့်ယူထားသောကြောင့် အားနေသဖြင့် တရော်ကင်ပွန်းကျိုသော် အဖေက တားသည်။
“ကရင်သားမွေး ခေါင်းမဆေးနှင့်၊ အိုးစည်တီး ပြီးအောင်ဆေး။”
တနင်္လာ ခေါင်းမလျှော်ရ။ အင်္ဂါမှ လျှော်ရန်။ မောင်သီဟ ခေါင်းမှ ဘောက်တဖွားဖွားထွက်အောင် တဗြင်းဗြင်းကုတ်သည်။
ခေါင်းမလျှော်ရသော် မောင်သီဟ လက်သည်းညှပ်ကို ထုတ်သည်။ ဘကြီးရောက်လာ၍ ယူသိမ်းသွားသည်။
အင်္ဂါနေ့ထိစောင့်။ လူရှင်းရာသို့သွား၍ လက်သည်းကိုက်နေလေတော့သည်။
နောက်နေ့ မနက်အစောကြီး တိတ်တိတ်လေးထသည်။ ခေါင်းမလျှော်ခင် တခါတည်း ဆံပင်ညှပ်မည်ဟု တွေးကာ ဈေးသို့သွားသည်။ ဈေးကပြန်လာသော အရီးနှင့်တွေ့၍ နားရွက်ဆွဲ အိမ်ပြန်ခေါ်လာသည်။
“မွေးရက် သောကြာ တနင်္လာ ကေသာဆံဖျား မဖြတ်ရ။”
အင်္ဂါသား မောင်သီဟ အိမ်ရောက်သော် ဆံပင်မွေးများကို ဆွဲနှုတ်သည်။ ပြက္ခဒိန်ကို ဖြဲဆုတ်သည်။ အိမ်ကလူများက သူ့အား ရူးသွားရှာပြီဟု ထင်ကြလေသည်။
#Note: Some say that these proverbs are meant for Sunday-born only. The people born in other days need to add in the corresponding days accordingly. For example, if Sunday-born cannot getahaircut on birthday, Friday and Monday, Monday-born cannot do that on birthday, Saturday and Tuesday.
Tags: Burmese characters in number, myanmar days, myanmar proverbs, Myanmar weekdays in characters
Burmese Character Numerology
Most of Burmese names are according to character numerology. It was originated from astrology. The formula is pretty simple. The days ofaweek can be represented with characters.
Sunday – အ A E I O U
Monday – ကခဂဃင K Kh G Gh Ng
Tuesday – စဆဇဈည C Ch Z Zh Ny
Wednesday – ယရလဝ Y R L W
Thursday – ပဖဗဘမ P Ph B Bh M
Friday – သဟ S H
Saturday – တထဒဓန T Th D Dh N
So Aung San Suu Kyi (အောင်ဆန်း”စု”ကြည်) was born on Tuesday while as her father Aung San (“အောင်”ဆန်း) was born on Sunday. U Thant (ဦး”သန့်”)was born on Friday. But it’s only common and very direct way of character naming system. There are more complex formulas for naming astrologically.
The characters can be translated to numbers as well.
1 – အ
2 – ကခဂဃင
3 – စဆဇဈည
4 – ယရလဝ
5 – ပဖဗဘမ
6 – သဟ
7 – တထဒဓန
So, “အုတ်ကျစ်ကျော်အေး မန္တလေး” rhyme is to quickly memorize the year Mandalay was founded. အုတ်(1)ကျစ်(2)ကျော်(2)ဧ/အေး(1) = 1221 (၁၂၂၁) is the Myanmar year when Mandalay capital was founded. To get the Georgian year, just add 638 to Myanmar year. Famous rhymes in Myanmar are မင်းဖြူမှန်မှန်ပြော (total viss of Mingun Bell), “လှည်းဝင်ရိုးသံ” တညံညံ ပုဂံဘုရားပေါင်း (total pagodas in Bagan), “သဇင်ပန်းခိုင်” တမြိုင်မြိုင် ရခိုင်ဘုရားပေါင်း (total pagodas in Mrauk U), etc.. Ah… waitamoment! Where are zero, eight and nine? Well, you see, there are only7days inaweek. So we use;
0 – သုည ဝ
8 – ရှစ် အဋ္ဌ အဋ္ဌမ
9 – ကိုး နဝ နဝင်း နဝမ
which are direct usage of these numbers.
Character numerology is used astrologically and believed widely. Some houses usually hangacouple of garlic bulbs above the doors or windows with an iron nail upward to prevent the thieves. Now you are confused thinking that thieves are not vampires, right? Ok, here is the explanation.
Thief = သူခိုး = သ+ခ = Friday+Monday
We don’t want Friday+Monday to enter our dwellings and want to repel with reversed order, Monday+Friday.
Monday+Friday = ကခဂဃင+သဟ
and here comes our garlic (ကြက်သွန်) which is Monday+Friday characters. So what about the nail? Nail is သံချောင်း (Friday + Monday). But we don’t want Friday+Monday, and so it was hammered upward to reverse it. So, we get two Monday+Friday(s)(ကြက်သွန်+reversed သံချောင်း) to repel the weaker single Friday+Monday(သူခိုး). It is called ကက်ကင်း (diametrically opposite in names) in Burmese. Well, you won’t even believe how the astrology is widely used in everyday life. The same goes for killingapapaya tree (သင်္ဘော) by piling up the charcoals (မီးသွေး) under it. Why do you think the caster oil plant (ကြက်ဆူ) project was campaigned country-wide during last decade?
Tags: Burmese characters in number, Myanmar weekdays in characters
The Legendary Myanmar Creature – ငေါင်း
Artist's impression of Ngaun ငေါင်း| Dodo bird of Myanmar?
ငေါင်း (IPA|/ŋáʊ̃/) သည် မြန်မာ့သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင်ပါသော ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် ထူးဆန်းသည့် လူတူသတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Ngaun isastrange legendary humanoid creature found in history records of Myanmar.
ငေါင်းသည် နာနာဘာဝမဟုတ်၊ ငှက်မဟုတ်၊ အတောင်ပံမပါ။
Ngaun is notaspirit, notabird and has no wing.
ပုံပန်းသွင်ပြင်မှာ ကိုယ်ပြားသည်။ လက်မောင်းများထွားကြိုင်းသည်။ အရပ်ငါးပေကျော်ရုံရှိသည်။
The physical appearance of Ngaun is the flat body, strong arms and barely over5feet tall height.
ခါးရိုးဆစ်များမရှိ။ ဒူးဆစ်မရှိ။ ခါးတစ်ဆစ် ခြေကျင်းဝတ်တစ်ဆစ်သာ ရှိသည်။
It has no backbone joints, no knee joints and only has one wrist joint and one ankle joint.
“ငေါင်းခြေတစ်ချောင်း မစားကောင်း” ဟုပင် ရှေးစကားပုံ ရှိသည်။
There is an old saying; “One legged Ngaun should not be eaten!”.
ဖဝါးသည် နောက်သို့လည်နေပြီး ဖနောင့်မှာ ရှေ့သို့ရောက်နေသည်။ ခုန်ဆွခုန်ဆွလမ်းလျှောက်သည်။ အပြေးမြန်သည်။
It’s foot is turning backward and heel is in front. It walks hopping and can run fast.
အမျိုးသမီးမျက်နှာပုံစံရှိသည်။ နဖူးပြောင်ပြီး ခြောက်လက်မကျော် ကျယ်သည်။ မေးကောက်သည်။
It’s face is similar to face ofafemale, hasabald forehead with over6inches wide and has protruding chin.
နောက်စေ့တွင် အရိုးချွန်ကြီးတစ်ခုပါသည်။ ယင်းဖြင့် လူတစ်ရပ်ကျော်သစ်ပင်များတွင် စိုက်၍ နားသည်၊ အိပ်သည်။
There isahorn-shaped bone at the back of it’s head. It uses the horn to stick itself on trees over human height and takes rest or sleep.
တစ်ပင်မှတစ်ပင် ဘယ်ညာလွှဲပြောင်းပြီး သွားလာတတ်သည်။
It can swing from one tree to another.
ဂနန်းဘာသာစကားဖြင့် စောက်ကွန်း (ခြေတစ်ချောင်းအကောင်) ဟုခေါ်သည်။
It’s called “Sauk Kun” (one legged creature) in Ganan language. (*Ganan isatribe of Chin.)
ယင်းလာရာလမ်းတွင် ငှက်ပျောဖက်ခင်းပြီး ဖမ်းရသည်၊ ဖက်ပေါ်နင်းမိလျှင် ချော်လဲပြီး ပြန်မထနိုင်ဟု ဆိုသည်။
It is said that Ngaung can be caught by spreading banana leaves on it’s way. It slips on the leaves and cannot stand up upon falling down.
ဟုမ္မလင်း၊ ဗန်းမော်၊ ဝိုင်းမော်၊ မိုးကောင်းမြို့ အနီးတဝိုက်ရွာများတွင် ငေါင်းကို တွေ့ဖူးကြသည်ဆိုသည်။
It is said that Ngauns were sighted near the villages around Homalin, Bhamo, Waingmaw and Mogaung townships.
ရှေးအကျဆုံးအထောက်အထားမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ် ပုရပိုက် (ရွှေတိုက်တွင်ထားသည့် ရွှေနန်းစဉ် လက်သုံးပုံတော် ဆေးရေး ပုရပိုက်ဖြူ) ဖြစ်သည်။
Earliest evidence of Ngaun was on the parabaik (*bamboo or wooden or leaf slips) from Konbaung era.
အဆိုပါပုရပိုက်တွင် တောင်ငူမြို့ဝန်က ဘိုးတော်ဘုရားကို လူငေါင်းဆက်သခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
That parabaik said that the governor of Taung Ngu offeredahuman Ngaun to Bodawpaya (*King Badon).
လက်နှစ်ဘက် ခြေတစ်ချောင်းပါသည်။ လက်များကို အတောင်ကဲ့သို့ ဖြန့်ကားထားသည်။ လူမိန်းမမျက်နှာ နှင့်တူသည်။ ဆံပင်တိုသည်။ အသံမှာ ငှက်သံဖြစ်သည်။ အသားမစား။
It had two hands and one leg. It spread the hands like wings. It’s face is similar to human female and had some short hair. It’s voice was that ofabird. It did not eat meat.
တိုင်းရင်းဆေး ထိပ်ကပ်နာပျောက်ဆေးနှင့် တိမ်သလာပျောက်ဆေးတွင် ငေါင်းရိုးပါသည်။
The recipes of Myanmar traditional medicines for sinusitis and cataract include Ngaun’s bone.
နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းမှာ ၁၉၅၅ တွင် ကချင်ပြည်နယ် ကဝါးပွန်းရွာမှ ရွာသား ဝဂျစ်ခန်သည် သစ်ခွဲကြောင်းတွင် လက်ညပ်နေသော ငေါင်းတစ်ကောင်အား ဖမ်းဆီးခဲ့မှုဖြစ်သည်။
The last record of encounter with Ngaun was that the villager named Wa Jit Khan from Kawapun village in Kachine State caughtaNgaun whose hand was stuck in the crack ofasplit log in 1955.
ဆယ်လော်ရွာရဲစခန်းတွင် တစ်ညထားပြီး နောက်နေ့တွင် သေဆုံးသွားသည်ဆိုသည်။
It is said that it died the next day after being kept one night in Selaw village’s police station.
ယခုခေတ်တွင် အနည်းဆုံးအနေဖြင့် ငေါင်းရုပ်ကြွင်းမျှကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင် ကမ္ဘာကျော်သွားနိုင်သည်။ သို့သော် မည်သူမှ မရှိသေး။
If someone were to discover even the fossil ofaNgaun nowadays, he would be world famous. But no one did yet.
ထို့ကြောင့် ငေါင်းသည် အဖြစ်မှန်လော ပုံပြင်လောဆိုသည်ကို ယနေ့တိုင် သေချာမသိနိုင်သေးပေ။
Therefore, it is unsure if the existent of Ngaun isafairy tale or real.
Ref: မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ အငြင်းပွား အမှတ်နည်း လူသိနည်း မြန်မာ့ဖြစ်ရပ် (၁၀၀)၊​ မောင်ကြည်သန့်။
Note: Similar creatures of worldwide legends
Tags: Ngaung, ငေါင်း, တိရစ္ဆာန်, သတ္တဝါ
A New Page or Is It?
So, this is my turn to test the infamous Windows8 developer preview. I felt it was quite unattractive until I found out about Myanmar Language support in it. Mg Pyone said there wasaMyanmar font in Win8 and I knew it was Unicode once I saw character points and dotted circle. It has all the character for Myanmar and ethnic character points.
Install startup had Myanmar input method but not inside the system.
The install startup has Myanmar keyboard in it’s option, and strangely not in the system. I guess it’s because it’s still the dev preview. You need to choose it while installing to be able to use later. The switch for Burmese and English layout is the familiar Ctrl+Shift shortcut.
This is the font - Myanmar Text (name is lame.. hummm?)
For the die-hard Zawgyi fans, you need to look no further. Just delete this font and install Zawgyi. Ta da… Win8 is all yours.
The font family is “Myanmar Text”, quite boring name for Microsoft. But it does the work. Most of the programs recognize it as fallback font while IE doesn’t. (Well you can set manually though.)
My Website seems ok.
It seems like existing Unicode fonts are usable butafew of them haveafew errors.
After installing firefox, the viewing of Burmese seems fine. Well, yes, it hasalot of mistakes and positioning errors. What the hell, they can be fixed once we submit the detailed bug report. The thing is that “Microsoft supports Burmese”. Windows 8 intends for not only desktop platform but also for the tablet and mobiles. So anything related with Windows 8 will come with Burmese support.
Some characters in Myanmar text's positioning are not consistent
Funny thing is that some people used to say that they don’t use Unicode standard because Windows doesn’t support Unicode. The fact is that only Burmese Unicode fonts developed by Burmese people is the most bug-free of all time while OS vendors release Burmese fonts with full of bugs upon not fully understanding of the language. Please keep in mind that latest Unicode model for Myanmar is 200% based on Myanmar3 font. Myanmar3 was made asaproposal model to Unicode consortium. So any Unicode font developer has full responsibility to follow Myanmar3 encoding or so we call the Unicode standard.
Sorting is just fine.
Sorting is just fine but not everywhere. Calculation is also fine in command prompt. But all Burmese texts are shown as question marks. Yes, any characters other than ASCII is shown as question mark in cmd. So, basically, Windows supports ICU for Burmese which enable Burmese texts to be calculable. So it’s supposed to be most likely fine in spreadsheet applications too. (#Note: Sorting is not using ICU engine, Ko Ngwe Tun pointed out in below comment and I agreed.)
There isaMyanmar Keyboard hidden in Windows 8 dev preview which is mostly in Myanmar3 input layout. It needs to be typed in sequential order though.
So I see Windows 8 asanew page for Myanmar Unicode revolution which is even bigger than OSX Lion supporting Burmese considering Windows has majority of userbase. But, hell no, I don’t believe people will change using Unicode any time soon. Most users are still not that smart or ready to accept the change yet I dare say. It’s not the main point that you are able type Unicode texts, but the most important thing is to have the guts to use Unicode no matter what against all odds of people around you not practicing standard. At least, as some of my friends say, “No more square boxes”.
Tags: Myanmar Text Font, myanmar unicode, Windows 8 supports Burmese, Windows8 preview
Burmese Demographic (Of Apple)
Burmese is being spoken everywhere.
Burmese is official language of Myanmar and is spoken by 32 million asafirst language and asasecond language by 10 million, particularly ethnic minorities in Burma and those in neighboring countries.
I must say Singapore is the country where most IT literate, Burmese speaking and Burmese scripts using active Apple customers are staying. I assumed this based on the download stats by Saturngod’s Ornagai App and Ko Tun’s iBrowser App.
Here are the brief stats. The stats are as of June 2011.
iBrowser Download Stats
Ornagai Free Download Stats
Ornagai Download Stats
As it can obviously be seen, there are at least 10K of Apple (iOS) customers who speak or read Burmese considering both apps are Burmese dedicated apps. And Singapore probably has 60%-75% of active Apple customers who are Myanmars. Since OSX Lion wasahit in Myanmar community, I’m looking forward to Burmese support in iOS soon too.
#This is the estimated usage percentage of Apple iOS products by Burmese reading people. It may reflect the percentage of other IT literate Burmese who are not Apple customers too and may not reflect the actual amount of total Myanmar IT people.
#The screenshots are courtesy of Ko Tun Thura Thet and Saturngod.
#This post has been submitted to Apple feedback asafeature request.
Tags: apple, iBrowser, iMyanmar, iOS, ipad, iphone, Myanmar language support, Ornagai
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်မောင်သီဟကလေးသည် မရောက်သည်မှ ကြာလုပြီဖြစ်သော ဘွားပု၏ ဇာတိ မုဒုံခရိုင် စံပြရွာသို့ အလည်တစ်ခေါက် ရောက်ခဲ့ချေသည်။ ရွာထဲသို့ ဝင်လိုက်ကတည်းက ခါတိုင်းနှင့်မတူ တစ်ခုခုတော့ ထူးသည်ကို သတိပြုမိလိုက်သည်။ ပထမဆုံးဝင်တွေ့သူက ငယ်ငယ်က ခွေလှိမ့်ဘက် ဗလကြီး။ နာမည်နှင့်လိုက်အောင် လူကလည်း ထွားကြိုင်းလှသည်။
ဗလကြီးဆန်ဆိုင်သို့ ဝင်လိုက်သည်နှင့် သတိပြုမိလိုက်သည်က တင်းတောင်းမကျ ပြည်တောင်းမကသော တောင်းကြီးတွေ။
“ဟေ့ကောင် ဗလကြီး ဒီကိုးလိုးကန့်လန့် တောင်းတွေက ဘာလုပ်ဖို့လဲ။”
“ဟာကွာ ဒါ ဗလကြီးပြည်တောင်းကွ။”
“ဟင် မင့်ပြည်တောင်းတွေက အယ်စတုံကြီးတွေ။”
“အေးလေ ငါ့ဗလနဲ့ ဒါနဲ့မှ အနေတော်ပဲ။ ပြည်တောင်း ပိစိကွေးလေးတွေ အားမရပါဘူးကွာ။”
“ဟာ ဒါတွေနဲ့ ရောင်းတော့ မရှုံးဘူးလား။”
“အို ဈေးကိုလည်း ကြည့်ကြပ်တင်လိုက်တာပေါ့ ပိုတောင်မြတ်သေး။ ရွာထဲမှာဆို ငါ့တောင်းတွေကို လူကြိုက်များလို့ ဆန်မရောင်းဘဲ တောင်းရက်ရောင်းရင်တောင် စီးပွားအတော်ဖြစ်နေပြီ။”
“ဒါဆို တခြားရွာက ဆန်ကုန်သည်တွေနဲ့ ဘယ်လို အရောင်းအဝယ်လုပ်တုံး။”
“ကိုးပြည်နဲ့လေးလုံးဆို သူတို့ တစ်တင်းပဲလေ။ ဒီလိုပဲ တွက်ပြီး ရောင်းဝယ်ရတာပေါ့။”
“ဒါပေမဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့စံ…”
“တော်တော် ဒါတွေလာမပြောနဲ့ ငါအကုန်သိတယ်။ ဒီမှာ ငသီဟ… မင်းဟာ ဘာစံကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အန်းယူဇာက အရေးကြီးဆုံးပဲကွ မှတ်ထား။ ယူဇာချွိုက် ယူဇာချွိုက်။”
ဪ… သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲ။ တွေးလျက် မောင်သီဟသည် ဗလကြီးဆန်ဆိုင်မှ ခွာခဲ့သည်။ အနည်းငယ်လျှောက်သော် ညောင်ညိုပင်အောက်မှ အကြော်သည် ဒေါ်ဘုမ၏ ဆိုင်သို့ ရောက်၏။
ဒေါ်ဘုမ အကျော်စိုင်မဟာ ငပျောကိုကျော် မျင်းခွာကျော်လျှက် ဗူးသီးလဲကျော် ကျက်သွန်ကျော်တမြီ အကျော်ဇုံ ၇ပီ။
ထူးဆန်းသော ဆိုင်းဘုတ်သည် ကျွန်ုပ်အား ကြိုလင့်၏။ ကျွန်ုပ်ကိုမြင်သော် ဒေါ်ဘုမသည် ပြာပြာသလဲပင် ခွေးခြေတစ်လုံး ထိုးပေး၍ ရေနွေးအိုး ချလေ၏။
“အကြော်စုံ တစ်ပွဲ အချဉ်များများဗျာ… ဒါနဲ့ ဘာလို့ စာလုံးပေါင်းတွေ အမှားရေးရသတုံး။ ဘုန်းဘုန်းစွန့်ထားတဲ့ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။”
ဒေါ်ဘုမသည် ကျွန်ုပ်အား သနားစရာ သတ္တဝါအလား ကြည့်လျက် ခေါင်းယမ်းလေ၏။
“ဒီမှာ မောင်သီဟ ၂၁ ရာစုမှာ စံတွေ စနစ်တွေ မလိုတော့ဘူး။ မော်ဒန်မှာ ကာရန်တွေ သတ်ပုံတွေ အားလုံးကို ချိုးဖျက်လိုက်ပြီ။ အဓိကက စားသုံးသူ အန်းယူဇာ နားလည်ဖို့ပဲ။ ဒီလို စတန့်ထွင်မှ ရွာမြောက်ဘက်ခြမ်းက တစ်ခုလပ်မ အကြော်ဆိုင်ကို ဖိုက်နိုင်မှာပေါ့။ အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ လူစည်နေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လား။ ယူဇာချွိုက် ယူဇာချွိုက်။”
ဒေါ်ဘုမသည် ပြောရင်းဆိုရင်း အကြော်စုံပန်းကန်ကို အချဉ်နိုင်းချင်းနှင့် ချပေးလေ၏။ ကျွန်ုပ်လည်း ဒေါ်ဘုမ၏ ဩဝါဒကို အံ့ဩဘနန်း နားထောင်ရင်း အကြော်စုံကို အကြွေးစားခဲ့လေ၏။ ဒေါ်ဘုမအကြော်ဆိုင်မှထွက်သော် ကျောင်းဆရာလေး ကိုကြိုင်နီနှင့် တိုးလေ၏။
“ဟာ ဆရာလေး မတွေ့တာကြာပေါ့ နေကောင်းလား။”
“ကျုပ် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး လုပ်နေတယ်။ အဲ ဘောဒိုင်လည်း နည်းနည်းပါးပါးလုပ်ပါတယ်။”
ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး။ မောင်သီဟငယ်ခမျာ မျက်ဝိုင်းများ အလုံးသားဖြစ်သွားတော့သည်။ ကျောင်းဆရာက မျက်မှန်ကိုပင့်လျက် ဆက်ပြောသည်။
“ကျုပ် ရန်ကုန်တစ်ခေါက်သွားတော့ မုခစာအုပ်ဆိုတဲ့ အိမ်သာနက်စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် သူများအတွင်းရေးတွေ လှန်လှောရင်းနဲ့ ယူဇာချွိုက်ဆိုတာကို ကျုပ်သဘောကျလာတာပဲ။ လူတစ်ချို့က လူနားမလည်တဲ့ ဂြိုဟ်သားစာတွေနဲ့ ရေးကြတယ်ဗျ။ ကျုပ်မေးကြည့်တော့ အန်းယူဇာတွေရဲ့ ယူဇာချွိုက်ကို နားမလည်တဲ့ သဘောက်မသား လူရမ်းကားတွေဆိုပဲ။”
မောင်သီဟလည်း ဉာဏ်မမီနိုင်။ ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ရင်သပ်ရှုမော နားထောင်ရ၏။
“ကျုပ် အဲဒါကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ ယူဇာချွိုက်ဆိုတာ ဒီမိုကလေဇီပဲ။ အခုကျုပ် ဖိနပ်ကျွဲတစ်ဘက်နွားတစ်ဘက်စီးတယ်။ ကျုပ်မိန်းမ အတွင်းခံတွေ ယူဝတ်တယ်။ စည်းတွေ စံတွေ စနစ်တွေဆိုတာ လူတွေကို ဘောင်ခတ်ထားတာပဲ။ အခုဆို ရွာကလူတွေလည်း ကျုပ်ဟောပြောထားလို့ ယူဇာချွိုက်မှ ယူဇာချွိုက် ဖြစ်နေပြီလေ။ တခြားရွာတွေနဲ့ မတူတာကို ဒီရွာရဲ့ရွေးချယ်မှု ယူဇာချွိုက်ပေါ့။ သူကြီးတောင်မှ သူ့ပေတံအကျိုးလေး ရှစ်လက်မခွဲပဲ ရှိတာကို တစ်ပေသတ်မှတ်မလို့ လုပ်နေတယ်လေ။ ကျုပ်လည်း ပြောလိုက်တယ်လေ လုပ်သာလုပ် ဒီရွာက အများသဘူတောရင် ယူဇာချွိုက်ပဲ လို့။ သူများတွေလည်း ပေတံဘာတံ ကောင်းကောင်းရှိတာမှ မဟုတ်တာ။ လုပ်ပေးတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်လေ။ အခုဆို သူကြီးက သူ့ပေတံနဲ့တိုင်းပြီးတော့ သစ်ဖြတ်စ အပိုင်းလေးတွေ လုပ်ပေးလိုက်တာ အားလုံးသဘောကျလို့။”
ဒီမိုကလေဇီ ဘောင်ခတ်… စကားလုံးများက မြင့်ပါဘိတောင်း။ ကျွန်ုပ်လည်း အံအားတသင့်နှင့် နုတ်ဘုတ်ငယ်ကို ထုတ်ကာ မှတ်သားသမှုပြုရ၏။
“ရွာဦးကျောင်းက ဘုန်းဘုန်းကတော့ ခေါင်းမာတယ်ဗျ ဘယ်လိုမှ ပြောမရဘူး။ ပိဋကတ်သုံးပုံ သင်္ဂါယနာမူက ကြီးလွန်းတယ်။ အခက်ဆုံး နှစ်ပုံခွဲလောက် လွှင့်ပစ်လိုက်ရင် သာမန်လူ လေ့လာလို့ရအောင် ကျုံ့သွားရင် လူတွေသဘောကျကြမှာပဲလို့၊ လူကြိုက်များလာရင် ဘုန်းဘုန်းမူက ယူဇာချွိုက်ဖြစ်လာမှာပဲလို့ ပြောမိတာဗျာ…”
ပြောရင်းဆိုရင်း ကျောင်းဆရာသည် ကျွန်ုပ်ပခုံးကို ကျော်ကြည့်ကာ ဖိနပ်နှစ်ဘက်ကို ခါးကြားကောက်ထိုးလျက် သုတ်ကနဲ ပြေးထွက်သွားလေ၏။ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်သော် ကျောင်းဆရာအား လိုက်ရှာနေသော ဘုန်းဘုန်းကို ကြိမ်လုံးကိုင်လျက် တွေ့လိုက်ရလေသတည်း။
Tags: Myanmar, satire, Unicode
Tags: myanmar unicode, Unicode myths, မြန်မာယူနီကုဒ်, ယူနီကုဒ်
Biggest Badasses Of Myanmar Journalism
Once inawhile, anyone would have done something wrong in their life. The main difference between the wise man andafool is thatafool’s mistakes never teach him anything. We all know giving credit to someone’s works when we use their works isamust especially in digital age. Some people love to give credits, well, to Google and Internet. They wouldn’t even bother mentioning original links or the author’s name.
“Image credit to Google.”
“New source: Internet.”
You can relax yourself thinking that they are just noobs of digital age like we all did. So, how do you feel about this.
180,000+ copies everyday, Kyemon is run by Ministry of Information as well. The Burmese word "အင်တာနက်" is direct translation of "Internet".
220,000+ copies everyday, Myanmar Alin is top newspaper despite of being propaganda tabloid.
10,000+ copies everyday, New Light of Myanmar is the main source of Myanmar news in English.
I can only conclude that the main responsible persons for international news of those newspapers are either badasses who don’t care about copyright or just complete ignorant morons. No wonder citizens of Myanmar have no clue about respecting copyright of other people’s works when the national newspapers are acting like this.
Note:# The images are screenshots of 26th July 2011 Kyemon and Myanmar Alin, and 11th May 2008 New Light of Myanmar
Tags: Burmese newspaper, myanmar journalism, myanmar news credit, Myanmar newspaper, ကြေးမုံ, မန်မာသတင်းစာ, မြန်မာ့အလင်း, သတင်းစာ
Currently, there are only two active Wikimedia Projects for Burmese language, Wikipedia and Wiktionary. I want to expend one more for Wikisource. Wikisource is an online library of free content publications, collected and maintained by Wiki community. Myanmar isaculture-rich country with lots of classical writings. I think it will be better if all the artistic writings of the past can be archived inasingle place which is easily accessible. I see no other sources for archiving other than Wikisource itself.
I want Tripiṭaka in Burmese texts along with Burmese translations to be uploaded to Wikisource as well. Tipitaka.org is maintaining the Tripiṭaka in multiple languages. But Burmese-pali texts are in Myanmar1(Unicode 4) texts. Those texts needs to be properly converted to current standard as well. In comparison, Myanmarbible.com is doing the good job maintaining the translations of Bible in various languages inside Myanmar.
The main issue here is we have onlyahandful of people who are actively contributing to Wiki projects. It will be better if we get some more recruits. I thought font issue wasaproblem in contributing Wiki. But it seems I guess wrong. Wikimyanmar site which can be written in Zawgyi encoding has little updates anyway.
Another issue is Copyright issues. I don’t want people to upload copyrighted materials to Wiki projects. Normally it seems there is no problem if we useacopyrighted material under fair use. But it’s an ethical issue and I don’t want to mix up the good works with unwanted attentions. Myanmar practices TRIP which means we can upload the publications to public domains after 50 years of author’s death. For example, we can upload Myo Ma Nyein(1909-1955)’s songs (texts) while we can’t upload Thakin Ko Daw Hmine(1876-1964)’s poems until 2014. We may need to listadatasheet of death years of Writers. I see no other than Ko Myat Thwin for this list.
Another issue is setting up an Incubator for new language at Meta before we get approval. Currently, not many Myanmar Wikipedians are active on Meta. If that’s the case, I might as well do it but I’m justalazy bun in this kind of formal things ##.
Tags: Burmese books archiving, Myanmar Books, Myanmar language, Myanmar Wikisource, Wiki, wikipedia